Kunyorera - Shenzhen Radiant Technology Co, Ltd.
STATION & Nhandare
Transport Vashanyi ane Immersive Experience pamwe Latest mu akatungamirira Display Technology
Ooh digitaalinen billboard
Penyai vanodada kupa zvakasiyana-siyana zvisarudzo kuti pamusoro kwedu mutsetse akatungamirira zviratidzo. Pane variables zvinokosha kufunga pakusarudza chii chisarudzo zvakakunakira iwe neboka rako. An zvakatungamirira nechiratidzo nokugadziriswa Kunonziwo sezvo zviri Pixel Mukandei. Pixel Mukandei ndiye kuyerwa mu millimeters kuti anoyera nzvimbo pakati nomumwe sumbu LEDs. Uyewo, ikava duku millimeter nhamba, dzakanga chisarudzo chacho sezvo kuchange zvakawanda LEDs por pemvura nzvimbo uye LEDs vari kugara munyika tighter pamwe chete. The zvakasimba Pixel nenamo kumusoro chisarudzo akatungamirira chiratidzo kuchaita kuti kuratidza uwane Graphics uye crisper kugutsikana pamusoro chiratidzo chako, kunyange kana mativi footage ishoma. yakakwirira chisarudzo edu anoratidza tiri zvakanaka-wakanyatsokodzera kuti nzvimbo ine nzvimbo mitemo, kana kubva zvomunharaunda zoning mitemo kana nokuda kumbova mamiriro.
Modern mamiziyamu, namaberere, uye ruzivo nzvimbo vari kwaziso vaenzi mutsva mavhidhiyo yeClearType uye Penyai ari pamberi digitaalinen KuMasiye mu dzezvimwe izvi. Akanyorerwa kuti matambudziko paruzhinji vakatozodzokera zvivako, Penyai akatungamirira vanoratidza mhinduro kununura mweya-kutora mufananidzo uye interactivity anogona kukwezva, chipikiranai vaudzawo, uye kurudzira vashanyi zvakafanana kumboitika apo zvinhu zvechigarire pazvidhindo kuti masangano uye mavanga.
Akatungamirira digitaalinen yeClearType iri kugonesa kuitika itsva nhepfenyuro mukamuri kumashure rusvingo. Nokuda yakakwirira chisarudzo uye yepamusoro kudiwa, diki Pixel namo uye zvinonyatsochengeta Michina muitiro unogona kuchengeta chidzitiro unhu ari pakakwirira chechetere. Zvichakadai, nhepfenyuro anonyanya hurongwa zvinodiwa, saka tinofanira kufunga izvozvo tisati kugadzira uye kubereka. Mukuwedzera, customization uye okusika inodiwa.
Penyai capacity uye Service
Kupa mumwe-chichiita basa, kubva design, R & D, mhinduro kwerubwinyo rwakagara rwuripo-sale kubvunza, gadzira, kutengesa, kugadzwa, ano kudzidzisa uye kutungamirirwa, pashure-sale basa.